Midowga Yurub oo Soomaaliya ugu deeqay 10.875 milyan oo EURO – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Midowga Yurub oo Soomaaliya ugu deeqay 10.875 milyan oo EURO
A warsame 18 December 2014 18 December 2014
Mareg.com: Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu Soomaaliya ugu deeqay lacaga dhan 10.875 milyan oo EURO, taasoo ka qeyb ka ah sida warka loo dhigay dadaalka wadajirka ah si loo horumariyo nolosha dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Hal sano ka hor, Soomaaliya iyo hay’adaha ayaa kala saxiixday Somali Compact, heshiiskaa oo la xiriiray in la dhiso naqshad maalgelin cusub oo fudud kaas oo uu ka caawin doono in aan hagaajinno maalgelinta dib u dhiska iyo horumarka dalka.
Michele Cervone d’Urso oo ah madaxa Ergada Midowga Yurub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, ayaa yiri: “Kabashada dhaqaalaha Bulsheedka waxey ka dhigan tahay aasaaska nabad lagu waaro” ayuu yiri.
Midowga Afrika oo soo dhaweeyey magacaabista RW Cumar Cabdirashiid